Fiainana andavanandro Mirongatra ny harom-paosy eto Antananarivo
FAKANA AN-KERINY MPIASAM-PANJAKANA
Olona telo no voasambotry ny zandary tao Isoanala sy Beakanga, momba ny raharaha fakana an-keriny ny mpiasam-panjakana iray eo anivon’ny minisiteran’ny rano sy ala ao Betroka.
Mpitandro filaminana-BFM Feno 40 taona ny fiaraha-miasa
Miisa 15 ny masoivohon`ny banky foiben’i Madagasikara (BFM) manerana ny nosy mba hiarovana ny vola mivezivezy sy ny fitahirizana azy dia manan-danja ny fisian`ny mpitandro filaminana amin`ireny toerana ireny hoy ny governoran`ny banky foibe,
Mpampiasa taksibe Ivato sy Ambohitrimanjaka Samy mangataka ny hampidirana koperativa vaovao
Kaominina roa no nahitana ny fihetsehan’ny mpanjifa momba ny fampiasana taksibe ny sabotsy teo.
Fanafihan-jiolahy teny Ampefiloha Olona iray no maty
Nisy jiolahy miisa niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana nanafika ny trano fivarotam-panafody Miaro etsy Ampefiloha omaly tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva.
Gerard Noel Ramamimampionona “Loharanon`ny tsy fandriampahalemana ny olona”
Tsy misy izay tsy mitaraina manoloana ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara amin`izao fotoana. Rafitra maro no manana andraikitra amin`izany fa anisan`ny tena olana dia ny olona, hoy i Gerard Noel Ramamimampionona, filoha lefitry ny komitin`ny Fampihavanam-pirenena (CFM),
Fanafihana mitam-basy Miaramila taloha ireo lasa jiolahy
Saron'ny mpitandro ny filaminana ireo jiolahy nanafika tao Ambano-Antsirabe II ny faran'ny herinadro lasa teo. Mpanangom-bokatra sy mpitondra izany aty Antananarivo no nisy nanafika ka vola 1.000.000 Ariary no voaroba.
Fotoana mampitaraina ny maro tsy hanana vola ny volana janoary tahaka izao taorian’ny nankalazana ny fetin’ny krismasy sy ny faran’ny taona.
Tsy vitsy ireo zara raha mihinana noho ny fahaverezan’asa nateraky ny maitso ahitra, antony mampirongatra ireo karazana tranga eny anivon’ny fiarahamonina. Raha ny fanadihadiana natao tetsy amin’ny kaomisarian’ny polisy etsy amin’ny boriborintany fahadimy Mahamasina dia mpangarom-paosy no tena betsaka tratran’izy ireo amin’izao. Misy ihany ny vaky trano fa vitsy. Vao omaly, ohatra, dia tovolahy roa manodidina ny 25 taona eo, mpinamana no tratra nangarom-paosy teny amin’ny toby fiantsonan’ny tataksibe eny Anosibe. Ody gasy niampy karazana kaskety maromaro no tratra tamin’izy roalahy izay samy nilaza fa nanana asa natao ihany teo aloha saingy tsy miasa intsony ankehitriny ka voatery manaotao foana. Hifandimbiasan’izy ireo ny karazana kasikety tratra tany aminy mba tsy hahafantaran’ny olona azy. Manodidina ny 6.000 ka hatramin’ny 10.000 Ar isan’andro ny vola azony. Mikasika ny vaky trano indray dia nambaran’ny kaomisera Rakotoarijaona Faly fa misy ihany izany ao amin’ny faritra iadidiany saingy tsy betsaka. Ny alatsinainy teo, ohatra, dia fitarainana vitsy monja no voarain’izy ireo toy ilay mpiasa an-trano iray nangalatra tamin’ny mpampiasa azy teny Anosibe…